Onye ọka iwu Hemp - USDA Hemp Nrube isi & Ndụmọdụ Azụmaahịa maka Hemp Cos
Ndị ọka iwu Hemp na-enyere ndị ọrụ ugbo aka
Hemp ndị ọka iwu, Tom Howard na Rod Kight kparita ụka banyere nsogbu azụmahịa chere Hemp ndị ọrụ ugbo aka, ebe Ọkaikpe Jeff Hall na-akọwa nsonaazụ ụwa n'ezie nke mgbagwoju anya mmanye iwu gbasara azụmahịa Hemp.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma ọ bụ jigide azụmaahịa cannabis gị, ọ dị mkpa ka ị gakwuru a hemp ọka iwu banyere omume na iwu enwere ike. Iwu dị iche iche na-emetụta na steeti dị iche iche gafee US, yana ezigbo ọkàiwu hemp nwere ike inyere gị aka ịgbaso ụkpụrụ ma debe azụmahịa ahịa cannabis gị. Ndị a bụ ihe ndị ọka iwu hemp nwere ike inyere gị aka.
Drafting na Nyocha Hemp
Mgbe ibido azụmahịa cannabis, ọbụlagodi na hemp, enwere ọtụtụ nkwekọrịta ịchọrọ ịme. Kọwapụta ọnọdụ gị na azụmaahịa cannabis bụ ihe kachasị mkpa. Ma ịchọrọ ịbụ onye nrụpụta, ma ọ bụ nke na-ere ahịa, ma ọ bụ na-ere ere, ịkwesịrị ịma ihe ikike gị na ọrụ dị na ikpe ahụ akọwapụtara. Onye ọka iwu hemp nwere ike inyere gị aka ịhazi nkwekọrịta ziri ezi nke metụtara ọnọdụ gị.
Nkwekọrịta dị n'etiti ndị ahịa azụmahịa hemp kwesịrị ịnwe akụkụ dị iche iche na ọrụ dị na azụmaahịa. Chọrọ nkwekọrịta ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ:
• Zụta ma ọ bụ ree hemp ma ọ bụ ngwaahịa hemp
• Zụta ma ọ bụ ree ahia ma ọ bụ azụmaahịa
• Kwekọrịta nkwekọrịta azụmahịa
• Kwee nkwekọrịta ụlọ
• Kwe nkwekọrịta iji hazie hemp
• Kwe nkwekọrịta maka esemokwu ndị metụtara ego na ikike onwe onye
Enwere ọtụtụ ụdị nkwekọrịta ọzọ ị nwere ike ịme n'etiti ndị otu ahụ na onye ọka iwu hemp nwere ike inyere gị aka ịhazi, tụleghachi ma ọ bụ kpakọrịta nkwekọrịta ziri ezi na-emetụta azụmahịa gị. Ftgba akwụkwọ nkwekọrịta dị ezigbo mkpa maka mmekọrịta azụmahịa n'ihi na ị nwere ike ichebe onwe gị n'ọnọdụ ọ bụla mgbe otu ndị na-esoghị isi nkwekọrịta.
Mkpanaka aka ma ọ bụ nkwekọrịta ọnụ enweghị ike ichebe gị nke ọma ma ejiri ya na nkwekọrịta edere ede nwere ike ichebe ikike gị.
USDA Hemp Regulatory Conservation
Ngalaba Ọrụ Ugbo nke United States (USDA) bipụtara ụkpụrụ gọọmentị na Tọzdee, Ọktoba 31, 2019. N'ime ụkpụrụ ndị a, usoro US Domestic Hemp Production Programme na-abanye na nkọwa ndị metụtara mmepụta hemp. A na-ahụta usoro iwu ọkụkọ dị ka ohere iji melite mmepụta na ire ahịa hemp, nke ga-abara ma ndị na-emepụta US na ndị ahịa uru. Ndị isi steeti na ndị India ga-enwe ikike izizi n'ime atụmatụ akwadoro nke USDA.
Dị ka akụkụ nke usoro oge ahụ, anyị nwere ike ịchọpụta nsogbu ndị kachasị emetụta nke na-eleba ihe ndị a anya:
• Asambodo mkpụrụ sitere na ọnọdụ, ụjọ, na ọnọdụ ịkụ azụ
• Mkpokọta ọdịnaya ọdịnaya THC na-emetụta ma ntụnye THC na THCA
• Nnwale na labs ndị edenye aha na-agbaso Iwu Nchịkwa Ọgwụ (DEA)
N'ime iwu ndị a, steeti na ebo niile nwere ike wepụta atụmatụ nke na-achịkwa ma na-achịkwa nrụpụta hemp. Ihe ndị dị mkpa maka atụmatụ steeti aghaghị ịgụnye ịkekọrịta na ịnakọta ozi, nnwale na nnwale nke ọkwa ịta ahụhụ nke THC, mkpofu ihe ọkụkụ na-enweghị ihe ọ bụla, yana mmanye iwu nke na-achịkwa na a na-emepụta hemp dịka usoro iwu oge.
Ọtụtụ ajụjụ na-ebilite ma a bịa n’ụkpụrụ steeti ahụ akọwapụtara, ọ bụ ya mere onye ọka iwu hemp nwere ike iji nye gị ndụmọdụ dị mma nke metụtara steeti gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche ihe niile metụtara atụmatụ USDA na steeti akọwapụtara. N'ụzọ a, ị na - echekwa onwe gị na akụ gị na azụmaahịa cannabis.
Nnabata Hemp State
The Farlọ Ọrụ Ugbo 2018 ntụgharị gbanwere nkọwa na mgbochi ndị metụtara usoro nchịkwa hemp dị na mbụ site na Bill Ọrụ Ugbo 2014 gara aga. N'ime ụgwọ ọrụ ugbo nke ugbua nke 2018, anyị nwere ike ịhụ na iwu gbanwere usoro gbasara nzụlite na ịkọ ọrụ hemp. N’ihi nke a, steeti na ebo niile nwere ike wepụta atụmatụ na itinye akwụkwọ maka imepụta hemp na steeti ma ọ bụ mpaghara ebo.
Njikọ ndị ọzọ: Kedu ka Farm Bill si kee Hemp… .na Marijuana ???
Ndị omebe iwu nke steeti nwere ike idozi nsogbu dị iche iche nke amụma-si na nkọwapụta nke hemp ruo na ikikere, asambodo, kọmitii, na ikike nchebe. Ọ dịkarịa ala, steeti iri anọ na isii nwere iwu ime mmemme maka ịkụ ahịhịa na mmepụta ihe.
Steeti ụfọdụ akọwapụtara gụnyere Idaho, South Dakota, Mississippi, na District nke Columbia ka nọ n’inweta ego zuru oke maka ịkọ hemp.
Mmụta iwu na Mwepụ Iwu
N'ihe banyere steeti Illinois, anyị nwere ike ịhụ otú steeti ahụ si akwadebe maka irube isi n'iwu ọhụrụ. Ndị ọrụ gọọmentị na-ekwu na iwu ọhụrụ adịkwaghị na akwụkwọ ndị ahụ, kama ọ na-abanye n'ike n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Na steeti Illinois, onye ọ bụla na-akwado iwepụta marijuana ntụrụndụ kpamkpam. Formanye iwu ọhụrụ ahụ ga-agbanwe kpamkpam ọnọdụ nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ahịa cannabis.
Ọnọdụ yiri ya mere Colorado afọ isii gara aga mgbe enwere wii wii iwu ntụrụndụ iwu na steeti. Otu ubochi, cannabis bu ihe iwu na ezighi ezi, na ubochi nke ozo, iwu sitere na iwu ndi isi kwuru. Mgbanwe a metụtara ọtụtụ akụkụ nke ndụ, site na ụkpụrụ ịnya ụgbọ ala na usoro ọkwa THC. Steti nke Colorado bụ onye izizi nwere mmejuputa iwu ọhụrụ. Anyị ka nwere ike ịhụ ndị ọkwọ ụgbọala na-akwọ ụgbọ ala n'okpuru ọrụ wii wii, nke bụ otu n'ime nsonaazụ wii wii iwu.
Cannabis abụrụla ihe kachasị na Colorado. Anabatara ịre marijuana n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. N’okporo ụzọ, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ mmemme ịchọ mma nke ụlọ ọrụ wii wii na-akwado. Ọtụtụ azụmaahịa na-eme atụmatụ ha na ịkwalite na mgbasa ozi nke ngwaahịa wii wii. Colorado bụ ihe atụ izizi nke otu ụlọ ọrụ cannabis nwere ike isi gbanwee ọnọdụ azụmaahịa n'otu steeti.
A hapụrụ ya ka ụdị mgbanwe a ga-eme na steeti Illinois na steeti ndị ọzọ na-akwado maka ịme ntụrụndụ wii wii. Dabere na amụma ndị ziri ezi, ego n'okpuru 30 grams nke ifuru ahịhịa ga-abụ ihe iwu kwadoro n'akụkụ ka ukwuu na Illinois na 2020.
Iwu mmanye ohuru ga emeputa uzo ahia ma obu ahia nke ndi omere ahia na mpụ. Agbanyeghị, a ga-agwa ụmụ amaala ka ha were ngwaahịa THC naanị site na isi mmalite iwu. Nke a ga --emere ọtụtụ ndị nwe ụlọ azụmaahịa ikesa marijuana na cannabis ngwa ahịa.
N'ihe banyere irube isi n'iwu, onye na-azụ ahịa aghaghị ime ihe ndị dị mkpa iji chebe azụmahịa na atụmatụ ego. Togwa ọka iwu hemp okwu nwere ike ịbawanye ohere nke inweta ikikere kwesịrị ekwesị n'okpuru iwu gọọmentị steeti.
Kpọtụrụ ndị ọka iwu Hemp
Kpoo Hemp Attorney maka azụmahịa gị:
Na North Carolina - mana ijere ndị ahịa hemp ozi na mba niile gbasara okwu gọọmentị - Attorney Rod Kight
Na Illinois, yana ijere ndị ahịa hemp okwu na gọọmentị etiti na ịgụta mba niile - Onye ọka iwu Thomas Howard
Ijere ndị ahịa azụmaahịa ebubo ị havingụ wii wii na-ezighi ezi - Attorney Jeff Hall.